चितवनमा कांग्रेस–माओवादी तालमेल ? – Saurahaonline.com
चितवनमा कांग्रेस–माओवादी तालमेल ?
चितवन, १५ बैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग तालमेलको अपेक्षासहित भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेद्वार घोषणा गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोडबलमा उनकै छोरी रेणु दाहाललाई महानगरको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय बुधबार राति लिइएको हो ।
दाहाल चितवनमा जनतासामू लोकप्रिय छैनन् । प्रचण्डपुत्री भएकै नाताले ‘नाम’ ले चिनिएपनि चितवने जनतासँग उनले स्थानीयस्तरमा कुनै गतिलो काम गरेको सम्झना छैन । तालमेलको अपेक्षा गरेरै माओवादीले उपमेयरको उम्मेद्वार घोषणा गरेको छैन । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष यमबहादुर परियारले भरतपुरको मेयरसहित जिल्लाका सबै स्थानीय तहका उम्मेद्वार आज शुक्रबार बिहान घोषणा गर्ने जानकारी दिए । माओवादीले जिल्ला पार्टी कार्यालयमा बिहान ८ बजे घोषणा कार्यक्रम राखेको छ ।
स्रोतका अनुसार मेयर पाए माओवादी नगर सभाको उपमेयर र अरु अधिकांश पद छोड्न तयार छ । “केन्द्रीय सरकारमा पनि माओवादी–कांग्रेस राम्रै गठबन्धनमा छन्”, एक नेताले भने, “स्थानीय तहमा पनि कयौं ठाउँमा मिलिसकेको छ, यहाँपनि अपेक्षा गरिएको छ ।”
स्रोतका अनुसार देशका चारै महानगरमा ‘प्याकेज’ मै सहमति खोजिदैछ । माओवादीले काठमाडौं र पोखरा आफू लिएर ललितपुर र चितवन आफूहरुलाई दिन कांग्रेसलाई आग्रह गरिरहेको छ । तर, कांग्रेस यो कुरामा तयार छैन । कांग्रेसलाई लाग्छ कि भरतपुर महानगर जसरी पनि ‘हामी नै जित्छौं ।’ त्यसैले उसले माओवादीको आग्रह त्यति सुनेको छैन । कांग्रेसको जिल्ला तह केन्द्रको निर्णय कुरेर बसिरहेको छ । ३४ जनाले मेयरमा आकांक्षा देखाएपछि जिल्लाले कसैको नाम काट्न सकेन र सबै माथि पठायो । “जिल्ला नेताको काम केन्द्रको निर्णय कुरेर बस्ने भएको छ”, एक नेताले भने, “मेयर घोषणा नहुँदा वडा–वडामा भोट माग्नै अप्ठ्यारो भएको छ ।”
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति कैलाश कोइराला केन्द्रले नै उम्मेद्वार तोक्ने भएकाले त्यसमा तीव्र छलफल भइरहेको बताउँछन् । त्यसो त एमालेले पनि भरतपुर महानगरको उम्मेद्वार घोषणा गर्न सकेको छैन । उसले पनि उम्मेद्वारको सम्भावित सूची माथिल्लो निकायमा पठाएको छ ।
सुरुमा प्रचण्डपुत्री रेणुको चर्चा काठमाडौंमा थियो । तर, उनले पटक–पटक काठमाडौंभन्दा चितवन नै आफ्नो रोजाइँ भएको बताउँदै आएकी थिइन् । गृह जिल्ला चितवनबाट नै निर्वाचनका लागि आउन बारम्बार दबाब आएको भन्दै रेणुले काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरमा नउठ्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।
संविधानसभा निर्वाचनका बेला काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट सभासदमा माओवादी तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहसँग पराजय व्यहोरेकी रेणु पार्टीमा उति चर्चित छैनन् । पार्टीमा अमुक कार्यकर्ताको हैसियतमा काम गरिरहेकी रेणुका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र चितवन जिल्ला कमिटीले पनि मेयरमा उम्मेदवार हुन योग्य उम्मेदवार ठानेको छ ।
रेणुको जन्म २०३३ असार २१ गते शिवरनगर गाविस भीमसेननगरमा भएको हो । उनका एक छोरा र एक छोरी छन् । उनले एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी छन् । २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको सदस्यता लिएकी दाहाल २०५३ देखि पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएका थिए । २०५४ सालमा एरिया कमिटी सदस्य भएकी दाहाल २०५६ मा पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य बनेकी थिइन् । उनी २०६२ सालमा रोल्पा जिल्लाको नेकपा माओवादीको सह–ईन्चार्ज पनि बनेकी थिइन् । दाहाल हाल एकीकृत नेकपा माओवादीको सचिवालय सदस्य छिन् । रेणुलाई महानगरको मेयर उम्मेद्वार बनाएपछि कयौं माओवादी कार्यकर्ताले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुको तर्क छ, “कयौं समयदेखि कार्यकर्तामाझ भिजेका नेता छोडेर काठमाडौंबाट उम्मेद्वार टिपेर ल्याउनु पार्टी पछि पर्ने स्पष्ट संकेत हो ।”
माओवादीले रत्ननगर नगरपालिकाको मेयरमा पूर्णबहादुर अम्गाईं क्षेत्री ‘सबोध’ र उपमेयरमा संगीता भट्टराई रेग्मीलाई सिफारिस गरेको छ । माडी नगरपालिकाको मेयरका लागि भने ठाकुर ढकाल सिफारिस गरिएका छन् । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको अध्यक्षमा प्रताप गुरुङ र उपाध्यक्षमा सावित्रा सिलवाल घोषणा गरिएका छन् । त्यस्तै पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिकामा नगर ईन्चार्जसमेत रहेका रामध्वज डल्लाकोटीलाई मेयरमा र सविता लामालाई उमेयरमा घोषणा गरेको छ ।